Hitia ihany, tsy aleo lehilahy mahay ?!
Amin’izao fiandohan’ny taona izao dia maro amin’ireo vehivavy tokan-tena no maniry hanana olon-tiana amin’izay.
Misy mihitsy aza no vonona sy sahy hiditra amin’izay lehilahy sendra azy fotsiny, satria leon’ny fanginana sy tsy mahazaka ny irery intsony. Tsarovy anefa fa hafa ihany izany mifankatia amin’ny lehilahy marani-tsaina izany. Voaporofo ara-tsiantifika rahateo fa tena mambabo fo izy ireny sady tsy mahafaty antoka ny mitia azy...
Tombony tsy azo tsinontsinoavina
Rehefa mijery horonan-tsarimihetsika dia tsy maha-te ho tia foana ny endrika omena ireo olona manam-pahaizana sy mahira-tsaina. Tsy vitsy anefa no voasarika amin’izy ireny, amin’ny tena fiainana. Raha ny fandinihan’ireo manam-pahaizana momba ny fifandraisan’ny olombelona aza, dia lasa «sexy» mihitsy ny lehilahy manan-tsaina, amin’izao vanin’andro iainantsika izao. Nahoana tokoa moa no tsy hanintona ny lehilahy manan-tsaina ? Amin’ny ankapobeny dia tena tian’ny vehivavy ilay mahatsiaro tena ho miaraka amin’olona manana tombony kely : manam-bola, matanjaka, manam-pahefana... Fa tombony iray hafa koa ny fahaizana, sady io tsy mety ritra tahaka ny vola, na mihaosa tahaka ny tanjaka sy andalovana toy ny fahefana. Rehefa miaraka amin’ny lehilahy manan-tsaina dia mahafantatra zavatra betsaka, mahatsiaro tena ho tsy very mihitsy, satria eo foana izy hampianatra sy hitari-dalana ary hanoro hevitra. Etsy an-daniny, tsy azo adinoina fa ny atidoha no tena ifaharan’ny taova rehetra, isan’izany ny taovam-pananahana.
Tsy resa-be fotsiny anefa izany, fa voaporofo ara-tsiantifika mihitsy ny tombony ananan’ny lehilahy manan-tsaina.
• Araka ny nambaran’ny avy ao amin’ny oniversiten’i Mexico dia matanjaka kokoa ny tsirinain’ny lehilahy mahay sy marani-tsaina. Olona 400 no nanaovana fanandramana sy nampanaovina fitsapam-pahaizana tamin’izany.
• Araka ny fikarohana nataon’ny orinasa LoveHoney, izay mpanamboatra kilalaom-pitian’olon-dehibe, dia matetika miray ara-nofo kokoa ny lehilahy marani-tsaina ary tena tia miray ara-nofo mihitsy.
• Matoky kokoa sy mora mandray kokoa ny lehilahy miaraka amin-janany vavy, ny ray aman-dreny, raha tsapany fa manan-tsaina io lehilahy io. Tsy mila porofo ara-tsiantifika akory izany, fa zavatra hitan’ny maso eny anaty fiarahamonina eny.
• Tiantsika ny mahita olona manao hadalana sy mampiseho havendranana. Ihomehezantsika ireny, manala andro antsika, saingy tsy ilaintsika ho ao anatin’ny fiainana. Tsy mbola nisy vehivavy babo, noho ny fahabadoan’ny lehilahy anankiray mihitsy !